Dowladda Kenya oo markale musaafurisay Soomaali | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Dowladda Kenya oo markale musaafurisay Soomaali
Dowladda Kenya oo markale musaafurisay Soomaali
In kabadan 90 qof oo Soomaali ah ayaa maanta dib waxaa loogu celiyay magaalada Muqdiaho Soomaaliya.
Dadkaan ayaa waxaa ay isugu jiraan caruur, dhalinyaro, iyo dad waayeel ah, kuwaas oo qaar ka mid ah ay kujireen xabsi kuyaalo gudaha garoonka diyaaradaha caalamiga ee jomo kenyata.
Dhalinyarada ayaa waxaa ka mid ah wariyayaal Soomalaiyeed, kuwaas oo wakiil wareedyo u ahaa idaacado ku yaalo magaalada Muqdisho, iyaga oo sheegay in ay wadanka ku joogeen sharci la’aan, balsa waxaa ay sheegeen in ay aad ugu faraxsanyihiin in dib loogu celiyo iyagoo xor ah dalka Soomaaliya.
Sikastaba ahaate, dadka qaar ayaa waxaa ay xabsiga ku jireen ku dhawaad laba bilood, iyaga oo lagu soo qab qabtay howlgaladii ugu horeeyay ee ciidamada Kenya ay ka fuliyeen xaafada Soomaalidu ku badan tahay ee (ISLII).
Waxaa sidoo kale dadkaas ka mid ah Oday Soomaaliyeed, kaas oo lagu soo qabtay howlgalka, waxa uuna in muda ah maxbuus ku ahaa goroonka Jomo Kenyata.
Ugu danbey, qeybtaan dadka ah ee maanta loo tarxiilay magaalada Muqdisho, ayaa waxa ay noqonayaan qeybtii afaraad ee laba bilood gudaheeda dib loogu celiyo, iyada oo guud ahaan tirada la tarxiilay ay gaarayso ilaa 360 ruux.
Previous articleXarun lagu xanaaneeyo Caruurta da’da yar oo laga furay magaalada Muqdiaho
Next articleDiyaarado dagaal oo markale duqeeyay Jilib Soomaaliya